Liverpool Oo Lagu Taageeray In Ay La Soo Saxiixato Xidiga Bixitaankiisa Ateltico Madrid Ku Dhawaaqay Ee Antoine Griezmann | Laacib.net
Liverpool Oo Lagu Taageeray In Ay La Soo Saxiixato Xidiga Bixitaankiisa Ateltico Madrid Ku Dhawaaqay Ee Antoine Griezmann
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka baxayo kooxdiisa xagaagan.
Inkasta oo ay Barcelona tahay kooxda ugu cad cad ee doonaysa saxiixa Antoine Griezmann, haddana Liverpool ayaa lagu taageeray in ay Griezmann la soo saxiixato.
Khabiirka ESPN ee Craig Burley ayaa aaminsan in Griezmann uu ku guulaysan lahaa haddii uu Liverpool ku soo biiro isla markaana uu Roberto Firmino booskiisa wax badan kula soo kordhin karo.
Liverpool ayaan haysan gool dhaliye u buuxin kara booska Mohamed Salah, Sadio Mane ama Roberto Firmino iyada oo markii ay dhaawacyada ku maqnaayeen laba ka mid ah ay Reds dhibaato dareemaysay.
Inkasta oo uu Origi wacdaro cusub la soo baxay isla markaana uu Jurgen Klopp ka soo saaray xaaladii adkayd ee markii ay Salah iyo Firmino ka maqnaayeen, haddana Craig Burley ayaa aaminsan in Griezmann uu wax badan soo kordhin karo.
Khabiirka ESPN ee Craig Burley oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Xaqiiqdii waxaan filayaa in ay Liverpool boos fiican u joogi doonto xagaaga in ay u dhaqaaqdo Griezmann”.
“Liverpool waqti xaadirkan waa koox aad ugu saraysa , wuxuuna isagu (Griezmann) uu caawin karaa Roberto Firmino kaas oo jecel in uu dhexda dib ugu soo dego”.
“Liverpool waa koox aad u wayn kuwaas oo horyaalka kula dagaalamaya Manchester City, isla markaana soo gaadhay labadii final ee Champions league ee ugu danbeeyay” ayuu Craig Burley hadalkiisa sii raaciyay.
Craig Burley oo sharaxaadiisa sii wata ayaa yidhi: “Anigu ma ogi haddii ay haystaan lacag ku filan oo ay ku samayn karaan(saxiixa Griezmann), laakiin anigu hubaashii maan tageen Manchester United”.
Intaas kadib Craig Burley ayaa isbarbar dhig ku sameeyay Griezmann oo ka garab ciyaaraya weerarka Barcelona oo uu Messi ku jiro iyo weerarka Liverpool.
“Waxaad ka hadlaysaa wax ku saabsan sida ay u fiican tahay ee Griezmann uu ugu xidhmi karo Messi iyo Barcelona, ka waran saddexda weerarka Liverpool?”.
“Taas ayaad arkaysaa oo aad ka hadlaysaa xoojinta qotoda dheer ee ay Liverpool u baahan tahay, waxa uu ku kordhin karaa Firmino ama Salah oo laga yaabo in ay kulamada qaar fadhiyaan”.ayuu Craig Burley hadalkiisa ku soo xidhay.
Griezmann ayaa la filayaa in uu heer kale u qaadi lahaa waayihiisa ciyaareed haddii uu helo caawinta Jurgen Klopp kaas oo ku soo caan baxay sida uu ciyaartoyda kooxdiisa uga soo saaro waxa ugu fiican.